Galmada aad layelato qof - Youmo
Att ha sex med någon - somaliska
Waxaa muhiim ah in dhammaan ay dareemaan raaxo iyo wax fiican marka aad galmo la sameyso qof. Waxa qof u ah raaxo ayaa wax xun u ah. La soco oo dhegeyso sida qofka kale uu u doonayo in uu ugu galmoodo. Tus oo sheeg waxay kula tahay dareenkaaga wanaagsan. Sheeg haddii wax ay kula fiicneen ama aad dareemeyso raaxo darro ama wax aan fiicneen.
Sidee baad u bilaabi?
Waxa caadi ah in la raboodo in la dhunkado,laabta lagu qabto iyo la salsalaaxo qof aad rabto inaad galmo la sameyso. Dad badan waxay jecel yihiin in la is dhunkado oo la is salsalaaxo waqti dheer.
Haddii dareenku wanaagsan yahay ayaa laga yaabaa in jirka uu bilaabo inuu isu diyaariyo inu galmo sameeyo. Waxaad ka akhrisan kartaa waxa ku dhaca jirka qoraalka ah ee rabitaanka galmada.
Dareen ka qaado haddii aad doonayso inaad sameyso waxyaabo badanoo la xiriira galmada. Waxaa laga yaabaa tusaale ahaan iney wacan tahay in la taabo taabto meelaha xasaasiga ah ee jirka qofka kale. waxa laga yaabaa in raaxo tahay in la isa salsalaaxo ayadoo dharka la xiran yahay.
Waxaa jira meelo badan oo jirka ka mid ah ee laga dareemo si fiican marka lagaa salsalaaxayo ama lagaa dhunkanayo. Halkan waxaa ku qoran tusaale oo qaar ka mid ah:
Cunaha iyo qoorta.
Waxaad weydiin kartaa qofka kale waxa u wanaagsan adigana u sheeg fekerkaaga. Waxaa laga yaabaa in aad rabtaan in aad dharka iska saartaan oo aad sii qawan ogaanshaan raaxada jirka qofba qofka kale.
Galmada markii ugu horeysay
Haddii aadan aqoon ulaheyn qof logu galmoodo, waxaa laga yaabaa in aad ku fikirtay in badan sida ay tahay in loo galmoodo. Dadka qaarkood waxay ka walwalaan qaladka. Laakiin waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan si loo ogaado galmada
Waxba ma ahan haddii ay noqon weyday sida aad fileysay. Galmada waa wax aad ku tababaran karto noqoloshaada oo dhan. Waxa ugu muhiimsan waa in adiga iyo qofka aad la galmooneyso is dhegeysataan. Galmada waa ay fiican tahay qof walba wuu dareemaya. Waa in aad iska deyso, haddii aad raaxo dareemeynin marna.
Waxaa wanaagsan in aad ka fikirto in aad iska ilaaliso uurka iyo cudurada galmada lagu kala qaado haddii aad go'aansato in aad galmo sameyso.
Siyaabo kala duwan oo loo galmoodo
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo galmo loo sameeyo Halkan waxaa ku qoran tusaale qaar ka mid ah:
Galmada salsalaaxa waa iney iska isku salsalaaxan si galmo oo kale meelaha qaar kood oo si fiican looga dareemaayo.
Galmada waxaa loo yaqaan marka uu guska dhax galo siilka. Markaa waxaad u baahan tahay ilaalinta ah ka dhanka uurka, haddii aadan rabin galmada in ay ku keento uur. Waxa kale oo laga yaabaa in aad u baahan tahay iska ilaalinta cudurada galmada keena.
Galmada dabada waa marka guska la gelinayo furitaanka futada. Markaas waxaa loo baahan yahay iska ilaalinta cudurada galmada keena.
Galmada afka waa in la nuugo, la dhunkado iyo in la leefo xubinta qofka iyo meela ku heeraarsan.
Siigeysiga waa in galmo qofku isku sameeynayo.